သိထားသင့်သော Computer Virus အမျိုးမျိုးအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » သိထားသင့်သော Computer Virus အမျိုးမျိုးအကြောင်း
- Alpha Vanishing
Posted by Alpha Vanishing on Sep 14, 2012 in Computers & Technology |9comments
Computer virus ဆိုတာ သူ့ကိုသူ attach လုပ်ထားတဲ့ program (သို့) file တစ်ခုဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာ တစ်ခုကနေတစ်ခုကို ပြန့်ှနှံ့ကူးစက်နိုင်ပါတယ် လူတွေမှာ Virus ကူးသလိုပဲ ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ System ကိုပုံမှန်အလုပ်မလုပ်အောင် နှောက်ယှက်မယ်၊ Windows ကို Error တွေများလာအောင်လုပ်မယ်၊ user data တွေကို ဖျက်ဆီးမယ်၊ Hardware တွေ Software တွေ အရေးကြီးတဲ့ File တွေကို ဖျက်ဆီးမယ် စတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် Virus အများစုဟာ executable fileတွေဖြစ်ကြပါတယ် ဥပမာ.. chrome.exe, system.bat, flashy.com စသဖြင့်ပေါ့သူတို့ဟာ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိနေရင်တောင်မှ သင်ကိုယ်တိုင်မှ သွားမဖွင့်ရင်/ သွားမ run မိရင် ကွန်ပျူတာကို ဘာမှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး ဒါကြောင့် မှတ်ထားရမှာက လူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မပါဝင်ပဲ Computer Virus သည် မပျံ့နှံ့ မကူးစက်နိုင်ပါ Virus ပျံ့နှံ့နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်…forward E-mail က attached file တွေ၊ memory stick (flash/thumb drives) တွေ၊ Full sharing ကနေ virus infected file ထည့်တာတွေ၊ အချင်းချင်း မသိပဲနဲ့ Virus infected file ကို share လုပ်မိတာတွေစသဖြင့်ပေါ့…
Malware ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကား ၂ လုံး Malicious Software ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေက အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့ virus လို program တွေပါပဲ.. အဲ့ဒီ Malware ကကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ၊ မသိစေပဲ single computer / server / computer network ထဲ ၀င်ပြီး ကွန်ပျူတာ System ပျက်ဆီးစေနိုင်အောင် ၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ရေးလေ့ရှိကြပါတယ်..Malware တစ်ခုမှာ Computer Virus , Worms, Trojan Horses, Most Rootkits, Spyware, Dishonest Adware, Crimeware and Other Malicious and Unwanted Software တွေပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်..
Worm ဆိုတာက virus နဲ့ဆင်တူအောင်ရေးထားကြတာပါပဲ.. virus တစ်ခုရဲ့ Sub-class လို့လည်းခေါ်လို့ ရပါတယ် သူကတော့ Virus လို လူကဖြန့်မှ ပျံ့တာမျိူးမဟုတ်ပဲ သူပါသူ Computer network ထဲမှာရှိတဲ့ အခြား ကွန်ပျူတာတွေကို လူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် လုံးဝမပါပဲနဲ့ ပျံ့နှံ့စေတာဖြစ်ပါတယ် အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်ကတော့ သူက သူ့ပါသူ System file တစ်ခုလို အယောင်ဆောင်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ သန်းပေါင်း ၁၀၀ လောက် copy ပွားနိုင်ပါတယ်၊ Hard disk ရဲ့ used space ကို များလာစေတယ်..Computer ရဲ့ System memory usage တွေ များလာစေတယ်.. network bandwidth တွေကိုတက်လာစေတယ်… Run ထားတဲ့ program တွေကို Not Responding ခဏခဏဖြစ်လာစေတယ်.. လူသိများတဲ့ Worm ကတော့ Blaster worm ပါ.. Blaster worm က Computer System ထဲမှာ ရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ Cracker တွေက ကွန်ပျူတာကို Remote လုပ်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ရေးထားပါတယ်..
Trojan horse ကို Trojan လို့လည်းခေါ်ပါတယ်.. ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးဝင်တဲ့ Software တွေမှာ ထည့်ထားတတ်ကြပါတယ်… ဥပမာပေါ့… Game တစ်ခုကို Install ပြီးဆော့နေပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာ Hacker တွေ Cracker တွေက ကွန်ပျူတာထဲကို ၀င်မွှေနေလို့ရအောင်လုပ်ပေးနေတယ်.. အဲဒီတော့ အဲဒီ Game ကို Trojan horse လို့ခေါ်တာပေါ့ .. တစ်ကယ်တော့ Game က တရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ Game ပဲ.. ဒါပေမယ့် Virus infected ဖြစ်နေတဲ့ Game လို့ပြောရလိုဖြစ်နေတာပေါ့.. Trojan horse တစ်ခုဟာ အောက်ပါအချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်..
♦ Remote Access
♦ Data Destruction
♦ Server Trojan (Proxy, FTP , IRC, Email, HTTP/HTTPS, etc.)
♦ Disable security software ♦ Denial-of-serviceattack(Dos)
သူကတော့ သူခိုးပေါ့နော်.. သူက ကွန်ပျူတာကို ထိခိုက်ဖျက်ဆီးချင်မှ ဖျက်ဆီးမယ်.. ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာမှာသုံးနေတဲ့ user ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော အချက်အလက်တွေ၊ အရေးကြီးတဲ့ Data တွေကို သူ့ရဲ့ Main server တစ်ခုခုကို နေ့စဉ် သတင်းပို့ပေးနေတယ်…Spyware တွေက များသောအားဖြင့် Web browser တွေကနေ ၀င်နိုင်ပါတယ်… ပြီးရင် သူက Browser home page ကိုပြောင်းထားတတ်ပါတယ်..သင့်ကို Error message တွေ အမျိုးမျိုးပြမယ်..(ဥပမာ- သင့်ကွန်ပျူတာမှာ problems တွေများနေပြီ..အဲဒါတွေပြင်ချင်ရင် အောက်ကခလုတ်ကို နှိပ်ပါ) စသဖြင့် ဆွဲဆောင်မယ်၊ သင်က link တစ်ခုကို click လိုက်ပေမယ့် သင်မဖွင့်ပဲနဲ့ အခြား Porn Site တွေ အလိုလိုပွင့်လာမယ် စသဖြင့်ပေါ့… တစ်ချို့ လူတွေက http cookie တွေကို Spyware တွေလို့ ထင်ကြပါတယ်.. တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် အဲဒိ cookie ထဲမှာ Spyware က track လုပ်နိုင်တဲ့ Data တွေပါလာတတ်တာကြောင့်Spyware Remover တော်တော်များများက Cookie တွေကို ဖျက်ပစ်ကြတာပါ … Spyware ကိုကာကွယ်ချင်ရင်တော့ pop-ups ကျလာတဲ့linkတွေကိုရှောင်တာကောင်းပါတယ်…
ဆိုတာကတော့ Advertising-supported software (သို့) software package တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…. သူကတော့ Screen မှာ Automatic ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးထားပြီး Download အတင်းလုပ်ခိုင်းပါတယ်… အချို့သော Adware များဟာ Spyware များဖြစ်တတ်ကြပါတယ်… Crimeware Crimeware ဆိုတာကတော့ Spyware, Adware, Malware အမျိုးအစားတွေထဲမှာပါပါတယ်.. သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ financial crime တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေး ကြတာများပါတယ်..သူက user password တွေ၊ links တွေ၊ အချက်အလက်တွေ ကို မှတ်သားထားနိုင်ပြီး သူ့ကို Run ထားတဲ့လူက ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြီး user data တွေကို ခိုးယူနိုင်တာပေါ့…. ဥပမာပြောရရင်.. ခုခေတ်စားနေတဲ့ key logger တို့ .. keystroke logging software တို့ဟာ Crimeware အမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
အထက်ပါ ComputerVirus အကြောင်းများကို စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတ ရစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
About Alpha Vanishing
Alpha Vanishing has written 12 post in this Website..
View all posts by Alpha Vanishing →
ခက်ခဲ နက်နဲ့လှပါတဲ့ ကွန်ပျုတာ အရှုပ်အထွေးကြီးတွေပါလား သယ်ရင်းရေ
ဒို့တော့ဖြင့် လိုက်မမှီတော့ပြီလေ ၊
ကြိုးစားပြီး ( ကျားအမြီး ဆွဲသလို ) တကောက်ကောက်တော့ လိုက်နေရမှာပါဘဲ ၊
ဗဟုသုတ ရစေတဲ့ အတွက် သယ်ရင်းကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ။
လူ စိုး ကြီး says:
Binder နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ ဘယ်သူမှနာမည်ပေးလို့မရတဲ့ Virus Type တွေကိုယ့်ဘာသာဖန်တီးနိုင်ပါတယ် …. ကိုယ့်ဥာဏ်ရည် အတွေးအခေါ်အလျှောက်ပေါ့
အဓိက က Crypter & Binder ဘဲ
ဗဟုသုတ အမှန်တကယ် ရပြီး ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်များ ပါ သိထားနိုင် တာမို့ Post လေးအတွက် ကျေးဇူးပါသားရေ။ :-)
ကျုပ်ကတော့ torn city ပလေယာ တစ်ယောက်ဆိုတော့ ၊ အဲဒီထဲက နာ့ဗ်ဘား ၁၈ သုံးပြီး လုပ်ရတဲ့
Hack intoaBank Mainframe ဆိုတာပဲ သိတယ်ဗျို့ 
ဒါနဲ့torn city ကစားတယ်ဆိုရင် ၊ မြန်မာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါဦး
ကာဇက်စတန် က ထောင်ထောင် ထောင်ထောင် ဖြစ်နေတယ်
Computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတ အမြောက်အများကို အလိုရှိနေသူပါ။ Computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလဲ အချိန်ရရင်ရေးသားဖော်ပြပေးပါဦး။ ကျနော် အဓီကသိလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ကွန်ပြုတာတစ်လုံးရဲ့ memory , Processor နဲ့ VGA Graphic ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကြည့်တဲ့နည်းရယ်။ computer တစ်လုံးရဲ့အရည်အသွေးမှာ အဓီကကျတဲ့အချက်တွေရယ်။ Window တစ်ခုတင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုတင်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုအရမ်းသိချင်နေပါတယ်။ သိရှိနာလည်သူများ ကျေးဇူးပြု၍ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်။
ကျနော် လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Computer က NEC Versapro VY16/W-4 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် Window7မတင်တက်လို့ပါ။ Window XP တင်တဲ့အခါမှာတော့ DVD Drive ထဲကို Window Software ခွေထည့်ထားပြီး Restart ချလိုက်တဲ့အခါမှာ prass any key boot from your CD ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါမှာ ခလုပ်တစ်ခုခုကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် ဆက်ပြီးတင်လို့ရပါတယ်။ Window7ကိုကျတော့တင်လို့မရလို့ပါ။ DVD Drive ထဲက Steup ကိုဖွင့်ပြီးတော့တင်တဲ့အခါမှာလည်း Window ကနှစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။ အထူးကိုကျေးဇူးတင်မည်ဖြစ်ပါကြောင့် . . . . . .
ကျုပ်ဆိုရင်တေ့ာ .. M$ Support ခေါ်မှာပဲ…။
အဲဒီမှာ အခွေတွေပေါပါတယ်..။ နောက်တခွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါလား..။
အခွေပျက်နေတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မပေါ့..။ ပိုသေချာချင်ရင်.. XP နဲ့.. HDD Format လုပ်ပြီးမှ.. W7 တင်ကြည့်ပေါ့..
window7installation စာအုပ်ကို အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ မြန်မာလို သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ။
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း . . . . . .